Miralem Pjanić oo ka hadlay dareenkiisa kaddib markii uu gaaray Barcelona – Gool FM
(Barcelona) 11 Sebt 2020. Xiddiga reer Bosnia ee Miralem Pjanić ayaa ka dagtay garoonka diyaaradaha magaalada Barcelona ee El Prat, si uu qeyb kaga noqdo kooxda reer Catalonia, kaddib markii uu kaga soo biiray naadiga Juventus.
Miralem Pjanić ayaa imaatinkiisa Barcelona kaddib wuxuu wareysi ku bixiyay website-ka rasmiga ah ee kooxda wuxuuna yiri:
“Maanta waa maalin qiimo gaar ah ii leh, aad ayaan u faraxsanahay”.
“Ma sugi karo inta aan kala kulmayo asxaabteyda cusub, runtiina waxaan xiiseynayaa xilli ciyaareedka cusub”.
“Waxaan rajeynayaa inaan ka caawin karo kooxda inay ku guuleysato tartamo badan”.
“Waxaan ahay diyaar, waxaana isku dayi doonaa inaan wax walba u sameeyo kooxdan”.
Ciyaaryahanka caalamiga ah ee reer Bosnia ayaa sheegay inuu ku dhacay caabuqa Korona 22-kii Ogosto, kaddib markii uu dareemay xoogaa caafimaad darro, taasoo ka dhigtay in tan iyo xilligaas uu galo xaalad karantiil ah, taasoo dib u dhigtay ku biiritaankiisa kooxda Barcelona.
Barcelona ayaa heshiis la gaartay kooxda Juventus bishii June ee la soo dhaafay kaasoo ku saabsanaa in Arthur Melo loo wareejiyo Juventus, iyadoo taasi badelkeedana ay Blaugrana heshay Pjanić iyo xoogaa lacag ah.